गोरसहित तीन जनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान शुरु – KhabarPurwanchal
गोरसहित तीन जनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान शुरु
खबर पूर्वाञ्चल, ३० जेष्ठ २०७५, बुधबार ०७:३९
विराटनगर / करिब ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र मोरङका सनम शाक्य हत्याकाण्डका प्रमुख अभियुक्तसहित तीन जनामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान शुरु गरेको छ ।
सुन तस्करीबाट आर्जित सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न विभागले सोमवार तीनै जनालाई काठमाडौं झिकाएर अनुसन्धान थालेको हो । सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्याकाण्डका मुख्य अभियुक्त चूडामणि उप्रेती (गोरे), अभियुक्त भुजुङ गुरुङ र डा. डेविट भनिने छिरिङ वाङ्गेल घलेलाई सोमबार काठमाडौं लगिएको थियो । विभागले सोमबार नै तीनै जनाको प्रारम्भिक बयान लिएको विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गत वैशाख १९ गते मोरङ जिल्ला अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा २०४४/४५ सालदेखि नेपालमा सुन तस्करी हुने गरेको विषय उल्लेख गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालिएका प्रतिवादीमध्ये भजुङ गुरुङ र डा. डेविट भनिने छिरिङ वाङ्गेल घले सुरुवातदेखि नै सुन तस्करीमा संलग्न रहेको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती २०६९ सालदेखि सुन तस्करीमा संलग्न रहेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
सुन तस्करी प्रकरणका अभियुक्त भुजुङ गुरुङले गृह मन्त्रालयका सह–सचिव ईश्वर पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिलाई दिएको बयानमा २०४५ सालदेखि नै सुन तस्करी गर्ने गरेको उल्लेख पनि गरेका छन् । सो अवधिमा १७ अर्ब १ करोड ८० लाख ७१ हजार ४ सय १३ रुपैयाँ बराबरको ३ हजार ७ सय ९९ किलो सुन तस्करी भएको सरकारी वकिलले जिल्ला अदालत मोरङमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङले दायर गरेको अभियोग पत्रका आधारमा सुन तस्करीका प्रतिवादीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गोरे, भुजुङ र छिरिङको सम्पत्ति खोज्न पनि शुरु गरेको छ । विभागका निर्देशक लामिछानेले केही ठोस प्रमाण र सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।
विभागले गोरेसहित भुजुङ र छिरिङको सम्पत्ति खोजी गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण निवाकरण ऐन, २०६४ को दफा (१५) बमोजिम छुट्टै समितिसमेत गठन गर्ने जनाएको छ । विभागले सुन तस्करी प्रकरणका प्रतिवादीमाथि शुरु गरेको अनुसन्धानअन्तर्गत आफन्तको सम्पत्तिलाई समेत रोक्का राख्ने तथा नियन्त्रणमा लिनसक्ने छ ।
सुन तस्करीमा जोडिएका प्रतिवादीका आफन्तले तस्करीबाट आर्जिक सम्पत्तिबाट लाभ पाएको देखिएमा उनीहरूमाथि समेत कारवाही हुने विभागले जनाएको छ । सुन तस्करीका प्रतिवादी गोरे, भुजुङ र छिरिङले तस्करीबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति विदेशमा राखेको भएपनि नियन्त्रणमा लिइने विभागका प्रवक्ता लामिछानेले बताउनुभयो ।
भुजुङ, उनको साला नाता पर्ने डेविटर डाक्टर भन्ने छिरिङ वाङदेल र गोरेले एउटै चेन बनाएर सुन तस्करी गरेको निष्कर्ष अहिलेसम्मको अनुसन्धानले देखाएको छ । एउटै चेनमा सुन तस्करी गरेपनि पछिल्लो समय ३३ किलो सुन भुजुङको डिजाईनमा छिरिङ र उनका चालक फाल्दुङ गुरुङले अनामनगर आसपासबाट लुटेको छानवीन समितिको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
३३ किलो सुन हराएपछि सोधपुछ गर्ने क्रममा गोरेले आफ्नै साथी सनम शाक्यको हत्या गरेपछि सुन प्रकरण बाहिरिएको थियो । सम्पत्ति सुद्धिकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि झिकाएका गोरेसहित ३ जना अभियुक्तहरु केन्द्रिय कारगारमा राखिएका छन् । यो समाचार आजको जनविद्रोह दैनिकले छापेको छ ।